कार्यदल बन्दा पनि किन सशंकित छन् नेपाल ?
वीरेन्द्र ओली आइतबार, साउन ३२, २०७७, ०६:४०
काठमाडौं-‘कार्यदल बनेको छ, हिजाे कार्यदलका सदस्यले सामान्य छलफल गरे। तर विवाद समाधानको रोडम्याप कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हाम्रा लागि तिखर चासो हो,’ नेकपाभित्र नेता माधव नेपालपक्षीय एक नेताले भने, ‘नढाँटी भन्ने हो भने, यो प्रक्रियाले दलभित्रका सबै समस्या समाधान गर्ला भन्ने हामी शंकामै छौं।’
उनले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समस्या समाधानका नाउँमा नेतृत्वका कमजोरी र गल्तीहरूलाई भुलेर नयाँ र बलियो गुट बनाउने अभ्यासमा लागे त्यो प्रत्युत्पादक हुनेसमेत चेतावनी दिए। भने, ‘यस्तो परिदृश्य देखियो भने त्यो हामीलाई मान्य हुने छैन। हाम्रो ध्येय स्पष्ट छ।’
दलभित्रका विवादहरूलाई निरुपणतिर लैजान अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा गठन गरेको विवाद समाधान कार्यदलले शनिबारदेखि आफ्नो काम थाल्दा पनि वरिष्ठ नेता नेपाल समूह भने आगामी दिनहरूबारे ढुक्क हुन सकिरहेको छैन। अध्यक्ष ओली-प्रचण्ड मिलेर आफूलाई कतै पाखा लगाएको त होइन भन्ने संशय यो समूहभित्र शंकाको बादल बनेर मडारिएको छ।
यसअघि वैशाख २० गतेको नेकपा विवादको सेरोफेरोमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिँदा पनि नेपालपक्षीय खेमा नराम्रोसँग चिढिएको थियो। त्यतिबेला नेता नेपालले मुखै खोलेका थिए, ‘दुई अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाएरमात्रै हुँदैन। पार्टी र सरकार विधिसम्मत रुपमा चल्नुपर्छ।’
त्यसको दुई महिना बित्न नपाउँदै फेरि ओलीप्रतिको असन्तुष्टिलाई लिएर असार १६ गते नेकपामा विवादले प्रवेश पायो। प्रचण्ड र नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागे। दुवै समूह ओलीको राजीनामा नै अन्तिम बटमलाइन भन्दै एक ढिक्का भए। तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली उनीहरुको अडानमा टसमस भएनन्। उल्टै उनले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई आफूले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने चेतावनी दिए। यतिसम्म कि, विरोधी खेमाका नेताहरुसँगको भेटमा ओलीले ‘तपाईंहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, सकेको गर्नुस्’ सम्म भने।
विवादकै बीच दुई अध्यक्ष मिल्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरी साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकम सकिएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड शीतल निवास पुगे। त्यहाँ ओली-प्रचण्डबीच फेरि सम्झौता गरेर अघि बढ्न थालेको सन्देश प्रवाह भएलगत्तै नेपाल समूह सशंकित भयो। त्यो दिन प्रचण्डलाई ओलीसँगै मिलेर अघि बढ्न भन्दै दबाबमा राखेर सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, प्रचण्ड त्यस दिन कुनै सम्झौता नगरी आफ्नो निवास खुमलटार फर्किएका थिए। अर्को दिन बिहान प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटार नेपाल पक्षीयका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन भेला आयोजना गरे। ओलीसँग मिलिभगतको आशंका मेटाउन प्रचण्डले यस्तो गर्नुपरेको थियो।
शुक्रबार फेरि ओली-प्रचण्डले विवाद समाधान गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन्। पार्टी विवाद समाधान गर्न बनाएको कार्यदलबाट खुला हृदयका साथ नेपाल समूहले स्वागत गरेको छैन। समानान्तर रूपमा यसलाई आंशका र विश्वासका साथ हेरेको छ। कार्यदलमा ओली समूहबाट महासचिव विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्ड समूहबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल, नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावललाई राखिएको छ। ओली, प्रचण्ड र नेपालका तीनै समूहबाट दुई/दुई जना हुने गरी कार्यदलमा राखिएको हो।
विवाद समाधान गर्ने गरी कार्यदलले भर्खरै काम गर्न थालेकाले तत्काल आलोचना नगर्ने नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए। ‘कार्यदलमा कसरी छलफलले प्रवेश पाउँछ? त्यसमा विवाद समाधान हुनेगरी कसरी छलफल हुन्छ? त्यसका आधारमा धेरै विषय प्रष्ट हुन्छ,’ भुसालले भने, ‘उहाँहरु (कार्यदल)ले कसरी काम गर्न त्यसका आधारमा मात्रै आफ्नो धारणा बनाउन सकिन्छ। नभए अहिले नै ठिक-बेठिक भनेर बोल्दा हतारो हुन्छ।’
पार्टीलाई विधान र विधिसम्मत तरिकाले चल्ने गरी कार्यदलले खाका ल्याए मात्रै मानिने भुसालले बताए। ‘अहिले पार्टीमा एउटा व्यक्तिलाई फालेर अर्को व्यक्ति राख्ने सघर्ष होइन,’ भुसालले भने, ‘पार्टीलाई विधान बमोजिम विधिपद्धतिमा चलाउने मुख्य विषय हो।’
माधव नेपालपक्षीय अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले भने दुई अध्यक्ष मिलेर अघि बढ्नलाई कार्यदल बनाइएको हुनसक्ने बताए। ‘अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भित्री सहमति भइसकेको गन्ध पाएका छौं,’ ती नेताले भने, ‘बाहिर विवाद समाधान गर्ने कार्यदल बनाउने नाटक गरेर अरुलाई छारो हाल्ने काम हुँदैछ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले भने आफूपक्षीय प्रभावशाली नेताहरूलाई कार्यदल बने पनि चनाखो हुन र दलभित्र आफूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको मर्म आत्मसात गर्न भनिरहेका छन्। ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आइपुगे पनि आफूले दल र सरकारको नेतृत्वका कमजोरीहरू सच्याउन यथाशक्य यत्न गरिरहने सोच नेता नेपालको छ।